Lapho-ke siwukuthi kuyafaneleka ukusebenzisa i-tattoo zesi-Roman?
Omunye izindlela zanamuhla ethandwa kakhulu ukugcizelela ubuntu babo siqu - tattoo. Kuningi okuye kwashiwo ngalokho kufanele yini umfanekiso igqoke ngaphansi izingubo lokukhetha abambe iqhaza, kodwa siqiniseke ngokugcwele ukuthi tattoo eyayigcwele ngizithola ngemva kweminyaka embalwa. Futhi, ngempela, abanikazi abaningi bakhetha tattoo imiklamo ngomuzwa ojulile, hhayi kuphela ukugxila ukubukeka yabo ikhanga. I choice omuhle kule tattoo - zesi-Roman, ngawo noma iyiphi inombolo kungenziwa emelelwa.
Ingabe izinombolo zesiRoma eza up amaRoma?
Ngaphambi wembatha isikhumba sakho siqu noma yimuphi uhlamvu kufanele bahlolisise ukubaluleka kwayo. Shono ngisho nanamuhla abaningi bakholelwa ukuthi Tattoos Ungashintsha kakhulu ukuphila PHETHO yomuntu. zesi-Roman empeleni elisetshenziswa isimo sasendulo saseRoma yonke indawo. Nokho, kuyathakazelisa Kuyaphawuleka ukuthi eminyakeni engu-500 BC, i Etruscans ayesazi kakade ukuthi izinhlamvu. Kwezinye izinguqulo, babekwazi ukuboleka yesiqalo ephathelene nokudabuka-AmaCeltic yabo. Nokho, noma kunjalo, uma wenza tattoo, izinombolo zesiRoma ingasetshenziswa inhloso yazo - ukubhala liveze izinombolo. Noma yimuphi izakhamuzi zezwe lethu ungabhala "Latin" noma iyiphi inombolo kufika ku-20, kukonke, ngaphandle kokungabaza. Kodwa eqinisweni, usebenzisa izinombolo zesiRoma, ungaboniswa iyiphi inombolo - izigidigidi izigidi. Uma ufuna ukugcwalisa tattoo ne eziyinkimbinkimbi futhi inani elikhulu, kuwukuhlakanipha ukuba uthintane onguchwepheshe ukusiza esipelingi.
Tattoos nezinsuku ezingeke zilibaleke
Nokho, kwezinye izimo, kufaneleka ukwenza imidwebo, izinombolo zesiRoma usebenzisa ukubhala izinombolo? Inketho ethandwa kakhulu - "zisishise" ngendlela efanayo ukuze isikhumba siqu izinsuku zakho ezibalulekile. Ngokuvamile eyayigcwele zokuzalwa zezingane noma abazali. abathandi zothando ukwenza imidwebo ayiwele naye, zazo zingafundwa Unyaka uqala ubuhlobo noma umshado usuku. Kodwa khumbula, uma ukhetha tattoo ezinjalo, zesi-Roman, zazo ukubaluleka kwanoma yimuphi umuntu ofundile namuhla uyazi, awukwazi ukufihla incazelo imfihlo yesithombe kubangelwa zangaphansi futhi baqonde ngamunye. Ngokuvamile isipelingi ukhethe ukubhala izinombolo zabo "ojabulisayo".
Yini odinga ukuyazi Ngokudweba Umzimba kanye zesi-Roman?
Uma uhlela ukuba izinto esikhunjeni esikhathini esithile, inhlanganisela okunengqondo kwamadijithi ukuhlukanisa, usebenzisa izimpawu zokuloba. izimpawu ngokuvamile asetshenziselwe le nhloso "-", noma, njengoba ofanele "/" ".". Ukukhetha tattoo "Izinombolo Roman", ungakwazi ukuhlola ngezithombe, nokubhala isitayela, futhi umbala wefonti. Nokho, ubuhle kanye version zakudala esiqinile egcwele inki omnyama ngaphansi amafomu esiqinile.
Senza Scrubs ebusweni ekhaya
Izingane ukhilimu for ebusweni nasemzimbeni
Devida Bekhema tattoo ngasentanyeni yakhe. Yini Beckham tattoo
Yini okufanele ibe icici ku inkaba
Indlela yokwenza "wathungela" manicure? Amasu kanye Izinzuzo
Dmitry Monya - Umdlali we club, "Abashayeli"
SikaCharcot eshaweni: Izibuyekezo amakhasimende esibonga
Multivarka "Redmond RMC-M4502": Ukubuyekeza, Umhlahlandlela